Madaxweyne Xasan Shiikh oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Serbia - Wargane News
Home Somali News Madaxweyne Xasan Shiikh oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Serbia
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada warqadihii aqoonsiga kaga guddoomay danjiraha dalka Serbia u fadhin doona Soomaaliya Mr Ivan Zikovic.
‘Wan ku faraxsanahay inaan Soomaaliya kugu soo dhoweyno. Dowladeyda diyaar ayay u tahay inay si buuxda kuula shaqeyso si aad waajibaadkaaga u gudato. Waxan filayaa inaad taageero badan naga siin doontaan adeegyada kala duwan ee ku burburey dagaaladii sokeeye”
Danjire Zikovic oo isna halkaasi ka hadley ayaa sheegay in dalkiisa uu Soomaaliya kala kaashan doono adeegyada waxbarashada, beeraha, tababarka mihnadaha dhalinyarada, sayniska,caafimaadka iyo kuwo kale oo horumarineed.
”Muhimad balaaran ayay inoo leedahay tababarada mihnadaha. Horumar badan ayaan ka sameyney laamaha kala duwan ee waxbarashada, laakiin tababarka mihnadaha ayaa u baahan in la sii xoojiyo si shaqo loogu abuuro dhalinyaradeena. Waa hubaal in haddii gacan balaaran la inaga siiyo dhinacyada mihnadaha iyo sayniska in wax badan oo horumar ah laga dareemi doono waddanka”